Nnụnụ nke ụbọchị nchekwa
Ebe nchekwa database nke Peter
Jikwaa ndị ndu
Jikwaa ihe ngosi
E nwere ihe karịrị ndebanye edere 12,000 na Avibase, e nyere ya na ụtụ taxonomies 9 dị iche iche, gụnyere okwu synonyms karịrị asụsụ 175. Enwere ike ichoputa akwukwo ndi ozo site na obodo ndi ozo, ha bu kwa edere ederede PDF maka ohia.
Chọgharịa site na ezinụlọ
Na-enye aka na Avibase
Usoro mgbasa ozi
Ndị òtù òtù Flickr
Ndi mgbasa ozi chọrọ
Avibase dịkwa na asụsụ ndị na-esonụ:
Na-enye nsụgharị ka mma
A sụgharịrị nsụgharị a site na enyemaka nke ngwa ngwa nsụgharị Google. Na-enye nsụgharị ka mma
Nabata Ọbịa | Banye | Debanye aha | | myAvibase | Akara
Iwu nzuzo Avibase
Avibase bụ ụlọ ọrụ weebụ na-abụghị nke azụmahịa nke a kwadoro na Canada, nke a raara nye ya iji kpokọta na ịkekọrịta ozi gbasara nnụnụ nke ụwa. Avibase anaghị anakọta ma ọ bụ jiri ozi nkeonwe gbasara ndị ọrụ ya na ndị ọbịa maka nzube azụmahịa. Ma, ọ na-anakọta ụfọdụ ozi onwe onye ọ na-eji na ụzọ ndị a.
Mbụ, maka ibe nke chọrọ njirimara onye ọrụ (nbanye na paswọọdụ, dịka ọrụ mAvibase na ọrụ Avibase), anyị na-echekwa kuki nke na-ebi na kọmputa gị maka nzube nke ịnọgide na-enwe nnọkọ gị. Ọ bụrụ na ị mepụta profaịlụ onwe onye Avibase, aha gị, adreesị ozi-e, asụsụ na ihe ndị ọzọ ịchọrọ, yana nchịkọta nke ihe ndị na-ahụ maka ihe ndenye gị, ga-echekwa n'ime sava anyị. A gaghị ekenye ndị ọzọ na ozi a ma ọ bụ naanị iji mee ka ị mata mgbe ị na-eji saịtị Avibase. Enwere ike igosi aha gị na nbudata ọha na eze (dịka ndị nyocha kacha elu), ma ị nwere ike ịrịọ ka ewepụ aha gị na profaịlụ gị. Ị nwekwara ike, n'oge ọ bụla, hichapụ profaịlụ gị na data niile metụtara, site na ịga na profaịlụ Avibase na ịpị "Hichapụ profaịlụ".
Avibase na-ejikwa Google Analytics, ọrụ nchịkọta weebụ nke Google nyere, Inc. Google Analytics na-eji kuki, bụ faịlụ ederede etinyere na komputa gị, iji nyere aka na weebụ nyochaa otú ndị ọrụ si eji saịtị ahụ. Ihe ọmụma nke kuki site na iji ojiji weebụ gị (gụnyere adreesị IP gị, ọ bụ ezie na a ga-ejedebe nke a n'ihi na anyị dabere na njirimara aha aha IP) ga-ebute ma chekwaa Google na sava na United States. Google ga-eji ozi a maka ebumnuche nke ịtụle ojiji nke weebụsaịtị, ịkọ akụkọ banyere ọrụ weebụsaịtị maka ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ na inye ọrụ ndị ọzọ metụtara ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ na ịntanetị. Google nwere ike ịnyefee ozi a gaa na ndị ọzọ ebe iwu chọrọ ka ịme ya, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ ndị ọzọ na-eme ihe ọmụma na Google. Google agaghị ejikọta adreesị IP gị na Google ọ bụla data. Ị nwere ike ịjụ iji kuki site na ịhọrọ ntọala kwesịrị ekwesị na ihe nchọgharị gị, Otú ọ dị biko rịba ama na ọ bụrụ na i mee nke a, ị gaghị enwe ike iji ọrụ zuru oke nke weebụsaịtị a. Site n'iji weebụsaịtị a, ị kwenyere nhazi data banyere gị site na Google na ụzọ na maka ebumnuche ndị e depụtara n'elu.
M na-agbalịrị ịnakwere aha niile ndị inyeaka bụ ndị nyeere m aka imeziwanye Avibase na afọ. Ọ bụrụ na aha gị gosipụtara nkwenye, ma ịchọrọ iwepụ ya, biko pịa kpọtụrụ m . Ọ bụrụ na ị na-eche na aha gị kwesịrị ịdị na ya, biko mee ka m mara, nke a bụ n'ezie nlekọta m (mgbaghara m!).
Avibase bụ Denis Lepage nwebisiinka. A na-enye nkwado kpamkpam iji mee njikọ na nke ọ bụla n'ime ibe nke saịtị ahụ, gụnyere, ma ọ bụghị nanị na, nchịkọta mpaghara na ederede profaịlụ.
Foto na onyinyo ndị a gosipụtara n'ime Avibase niile bụ ndị nweburu nwebiisinka nke onye edemede mbụ ha, ma ọ bụrụ na e gosipụtara ya site na ikikere ikike ikike. Foto niile egosipụtara na Flickr API na-abụ ihe onwunwe nke ndị nyere ha aka. Avibase anaghị echekwa foto dị na ya site na API, ma naanị na-ejikọta njikọ na nsụgharị ntụgharị nchịkọta nhọrọ. Foto niile gụnyere aha onye edemede (dị ka enyere Flickr) ma jikọta ya na peeji nke onye edemede na Flickr. Naanị foto ndị akara maka nyocha ihu ọha site na ndị dere ha gosipụtara na Avibase. Nke a bụ ọnọdụ ndabara na Flickr, nke nwere ike ịgbanwe site na njide akaụntụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ese foto na akaụntụ Flickr, ọ ga-achọ ịrịọ ka esere foto gị dị ka vidiyo na Avibase, ị nwere ọ dịkarịa ala 2 nhọrọ. Mbụ, ị nwere ike kpọtụrụ m ka ịjụ ka foto gị gharazi igosipụta, m ga-enwe obi ụtọ ịchọta ngwa ngwa ka m nwere ike. Mgbe ị na-eme nke a, biko nyekwa aha aha gị flickr, ya mere apụrụ m ịchọpụta ma debe nhazi iji gbochie foto gị. Nhọrọ nke abụọ gị bụ ịgbanwe ihe ngosi nke ụfọdụ ma ọ bụ foto gị niile ka ha gharazie inwe nyocha ihu ọha . Enwere ike ime nke a n'ụwa niile n'ime akwụkwọ Flickr gị, n'okpuru Nzuzo na ikikere , ma ọ bụ maka foto nke ọ bụla. Mgbe ị gbanwere ọnọdụ a, enwere ike igosi foto dị ka enweghịkwa na Avibase, ma emesị ewepụ ya kpamkpam.
Foto eji Avibase ọkọlọtọ ejiwo ikikere site na ndị nwe ha nwekọrọ ihe, ndị a na-ahụkarị site n'ịgbagharị òké gị n'elu foto ọ bụla ma ọ bụ ịpị foto.
Ikwenye iji ihe ọ bụla n'ime foto ndị a gosipụtara na Avibase enweghị ike ịnye site na m ma a ghaghị ịrịọ ya ozugbo na onye nwe ihe nwebisiinka. Ụfọdụ n'ime foto Flickr dị maka iji n'okpuru License Creative Commons, ma ọ bụ ọrụ gị dị ka onye ọrụ iji hụ na ndị ahụ na-agbaso usoro nke ikikere a kapịrị ọnụ. Ozi a dị na saịtị Flickr mgbe ịpị foto.
Ọ bụrụ na ị nwere foto ịchọrọ ịchọta site na Avibase, ihe niile ị chọrọ ime bụ ime ka foto ndị ahụ dị na akaụntụ Flickr, ma hụ na profaịlụ gị na-enye ohere maka ọchụchọ onwe onye.
Na-ekwusara ọdịnaya ekwesighi
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọ foto na-ekwesịghị ekwesị a gosipụtara na Avibase, ụzọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị pịa nanị akara ngosi akara ngosi dị na akuku aka ekpe n'okpuru ebe ọ bụla n'ime foto. Ojiji nke bọtịnụ a ga-ejedebe na nzuzo na foto ndị na-anọchite anya nnụnụ. A ga-enyocha foto ọ bụla e bipụtara n'ụdị a ma wepụ ya ma ọ bụrụ na ọ dị mma. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịmepụta votu na foto ọ bụla site na ịpị mmanya n'okpuru foto a. A na-egosiputa akara ngosi ntuli aka na oke ndị ọbịa (mgbe ọdabara) n'okpuru foto. N'ikpeazụ, ị nwere ike iji bọtịnụ akụ ahụ, na ala aka nri ala, iji gbanwee foto ahụ na onye ọzọ a na-ahọpụtaghi ụdị nke ụdị.
Avibase abiala 279,279,259 oge kemgbe 24 June 2003. © Denis Lepage | Amụma nzuzo